Qaamuuska magacyada taariikhida oo magaca Yaasmiin lagu kordhiyey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Qaamuuska magacyada taariikhida oo magaca Yaasmiin lagu kordhiyey
La daabacay fredag 7 juni 2013 kl 16.45
Magaca Yaasmiin oo yeeshay maalin la xuso
Dhowaantan, toddobaadkii ina dhaafay gudihiisa ayey ahayd kolkii lagu daray qaamiiska taariikhda iyo magacyada, waxa afkan iswiidhishka lagu yiraahdo Almnacka (kalanderka) magacyo. In loo xafladeeyo maalinta magacaaga waa mid taariikh soo-yaal ah ku leh hiddaha iyo dhaqanka dalkan. Waase kuwee magacyada ku jira liiska qaamuuska taariikhda iyo magacyada? Caalinka Sture Allén, wuxuu ka mid yahay xubnaha joogtada ee guddiga akadeemiyada Iswiidhen, isagoona ka mid ahaa dadyoowgi fara ku tiriska ahaa ee ka dambeeyey habeeynta qaamuuska taariikhda iyo magacyada ee iminka lagu dhaqmo:
- Waa wax xaqiiq ah in aan lagu darin liiska qaamuuska taariikhda iyo magacyada magacyo ey dalka dhammaantii ka sitaan hal ama laba ruux ee qiyaastii ku dhowaad tobanka malyuun ee dalka ku dhaqan. Waa inuu noqdaa magac dalka kub aah-san. Iyadoona ey dalka laga isticmaalo magacyo tiradoodu kor u dhaafayaan 150 000 oo magac. Halka dhanka kale ey magacyada ku jira qaamuuska taariikda iyo magacyadu (almnackan) dhammaantood yihiin 600.
Taariikhda soo-yaalka ee qaamuuska taariikhda iyo magacyada ayaa ka jira waddammo fara badan, hase-yeeshee ey waddammada dhaca waqooyiga Yurub isticmaalaan taariikhdaa soo-yaalka ah oo keliya dalka Iswiidhen iyo dalka deriska la ah ee Finland. Caadada soo-yaalka ee isticmaalka qaamuuska taariikhda iyo magacyada ayaa horraantiisii ku saleeysnaa iyada oo baahiyi ka dhalatay dhanka kaniisadaha iyo diinta iyo diinta masiixiga, maadaama ay u muuqatay wax khaldan in loo dabaal-dego maalinta dhashada ruuxa. Iminka ayey ku kala duwan yihiin gobollada dlku habka looga dabaal-dego maalinta magacyada ee ku xusan qaamuuska taariikhda iyo magacyada, iyada oo reerayoowga qaarkood si aad ah looga xuso maalintaa magaca, halka qaarkood aan macne sidaa u ballaaran ku lahayn, hase yeeshee wxaa xaqiiq ah in magucu macne wayn ugu fadhiyo ruuxa, sida uu sheegay Sture Allén:
- Waa hubaal inuu dalkan Iswiidhen leeyahay dhaqan soo jireen ah ee la xiriira magaca, ama ugu yaraan lala socodo cidda maalintaa leh maaca qaamuuska taariikhda iyo magacyada ku qoran. Gobollada qaarkood ee dalka ku yaala ayey maalinta magacu kala qiime adan tahay kolka loo barbar-dhigo xafladda maalinta dhalashada. Waa fal caddeeynaya in magacu u leeyahay qiime aad u ballaaran skahsiga.
Wixii ka horeeyey sannadkii 2011 wuxuu dalku soo maray taariikh ey ka jireen qaamuusyo taariikh iyo magacyo ee kala duwan, hase yeeshee si is-bedel loogu sameeyo jah-wareerkaa, waana halka uu ka dhashay qaamuuska taariikhda iyo magacyada ee iminka howl-gala. Qaamuuska taariikhda iyo ,agacyada ayey masuuliyaddiisa dusha ka hayaan afar ruux oo aan sidaa ugu degdegin sidii wax looga bedeli lahaa . Guddiga ayaa bulshada ka hela farriimmo badan, halka loo baahan yahay sababo aad iyo aad u adag sidii is-bedel loogu sameeyn lahaa, sida uu hadalka u dhigay Sture Allén.
Marar dhowr ayaa ah doodo laga dhaliuyey sidii qaamuuska taariikhda iyo magacyada loogu dari lahaa magacyo ka soo jeeda dalka dibaddiisa oo ey sitaan dadyoow badan oo dalka ku dhaqan, sida magaca Maxamad, oo iminka kaalinta 71-aad dalka kaga jira magacyada bulshada Iswiidhen.
hase yeeshee aaney jirin haba yaraatee wax ka hor-istaagaya in magac cusub lagu daro qaamuuska taariikhda iyo magacyada, haddii uu magacaasi buuxiyo shuruudaha adag ee hor-yaala. Is-bedelkii ugu dambeeyey oo dhowaantan lagu sameeyey qaamuuskii 2001-dii ayaa lagu daray labada magac ee kala ahEmmy iyo Jasmine oo magaca dambe uu yahay magac beershiyan ah. Sture Allén ayaa sidoo kale tusaale u soo qaatay in qaamuuska taariikhda iyo magacyada wixii ka dambeeyey sannadkii 2011 wax laga is-bedello aan badneyn oo lagu sameeyey ey ka mid ahaayeen in lagu daray magaca Fatima oo ka soo jeeda sida magaca Maxamad waddammada carabta:
- Waxaa jiray farriin talo ah ee naloogu soo jeediyey inaan magacaa ku darno qaamuuska taariikhda iyo magacyada, iyada oo dhanka kale laga isticmaalayey magaca in muddo ah dalka Iswiidhen iyo magaca oo ey siteen dadyoow badan. Mararka wuxuu buuxiyey shuruudihii. Intaa waxaa dheeraa in magacu muujiyey inuu caalamka u furmay.
Sida ay iminka u muuqato, ayaaney magaca Fatima sidan tiro dadyoow badan, marka loo barbar-dhigo magaca Maxamed noocyadiisa kala duwan ee loo higaadiyo Maxamad. Magaca Fatima ayey sitaan hablo gaarsiisan 4 000 oo ruux, halka ey magaca Maxamed sitaan 33 500. Halka ey magaca cusub ee la go'aamiyey in lagu daro Jasmine ey sitaan hablo gaarsiisan 8 500, sida uu sheegay Sture Allén.
Weli ma jiraa haddaba xiisihii bulshadu u hayeen dhaqanka soo-yaalka qaamuuska taariikhda iyo magaca? Sture Allén, ayaa ka markhaati kacaya inuu weli halkiisii ka socdo:
- Haddii laga taaba qaado waraaqaha, telefoonnada iyo farriimaha dhanka aaladda internet-ka naloogu soo diro - haa. Waana falal xiiso leh, maadaama uu dhaqanka soo yaalki ihi qeeyb ka yahay luuqadda.